volume - Synonyms of volume | Antonyms of volume | Definition of volume | Example of volume | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for volume
Top 30 analogous words or synonyms for volume
Local Sheet Local Sheet သည် Virgo Supercluster (Local Supercluster) နှင့် Local Volume ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
အန်တိုနော့ဗ် အေအန်-၂၂၅ The pressurized cargo hold is 1,300m in volume; 6.4m wide, 4.4m high, and 43.35m long – longer than the first flight of the Wright Flyer.
မဟာဖောင်းပွမှု အဓိကလိုအပ်ချက်မှာ သေးငယ်သောထုထည် Hubble volume မှ ယခုလက်ရှိ လေ့လာနိုင်သောစကြာဝဠာအရွယ်ထိ ဆက်လက်ကြီးထွားရန်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် မဟာစကြာဝဠာအနေဖြင့် ပြင်ညီကဲ့သို့ပြားချပ်နေအောင် လိုအပ်ပေသည်။ ယင်းလိုအပ်ချက်သည် ဖောင်းပွမှုကာလအတွင်း ဖောင်းပွကိန်း အနည်းဆုံး ၁၀ ဖြင့် ပြန့်ကားရမည်ဟု ယေဘုယျ တွေးထားသည်။
ဝဲကြီးဆည် ဆည်တည်ဆောက်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စတင်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။ သို့သော်လည်း (နအဖ) စစ်အစိုးရ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကြီးသန်းရွှေနှင့် နီးစပ်သူတဦးဖြစ်သည့် ဦးတေဇ ပိုင်ဆိုင်သည့် "ထူးကုမ္ပဏီ" က ဆည်တည်ဆောက်မည့် နေရာများမှ သစ် များကို စတင်ထုတ်ယူနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ (သံလွင်မြစ် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့၏ သတင်းစာ Salween Watch Newsletter Volume 1 ကို ကြည့်ပါ။)
ယူးအင်နာ ၃ မတ် ၂၀၁၁ မှ ၄ ဇွန် ၂၀၁၂ ထိ တီဗီအင်တာတိန်းမင့် ဒီညအစီအစဉ်၌ ပင်တိုင်တက်ဆက်သူ လုပ်ခဲ့ရာ အက်စ်ဘီအက်စ် အင်တာတိန်းမင့်ဆုပေးပွဲ၌ အကောင်းဆုံးမျိုးစုံဖျော်ဖြေနိုင်သူဆုကို ရခဲ့ပြန်သည်။ လက်ရှိ၌ ကေဘီအက် ကူးအက်ဖ်အမ် ၏ Let's Crank Up the Volume တွင် ရေဒီယိုတင်ဆက်သူ လုပ်နေသည်။ သူမတင်ဆက်သော ရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာ လှိုင်းတို လှိုင်းရှည် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပြီးလျှင် အကောင်းဆုံးအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း ခံထားရသည်။
NASDAQ The NASDAQ "(acronym of National Association of Securities Dealers Automated Quotation System)" ဆိုသည်မှာ အမေရိကန်ရှိ စတော့ဈေးကွက်ဖြစ်သည်။ NASDAQ သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ အီလက်ထရွန်းနစ် ဖန်သားပြင်များဖြင့် စတော့ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သော ဈေးကွက်များတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း ကုမ္ပဏီ ၃၂၀၀ ကျော်မျှ စာရင်းရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အခြား စတော့ဈေးကွက်များထက် ပိုများသောစာရင်းရှိပြီး တစ်နေ့တာအတွက် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ(trading volume)မှာလည်း ပို၍ များပြားသည်။
ယူးအင်နာ ယူးအင်နာ (၅ ဇွန် ၁၉၈၂ မွေး)သည် တောင်ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင်နှင့် ဒီဂျေဖြစ်သည်။ "High Kick! Through the Roof" (၂၀၀၉-၂၀၁၀)နှင့် "လျှို့ဝှက်ဥယျာဉ်" "Secret Garden" (၂၀၁၀) ၌ ဇာတ်ရံအဖြစ် ပါဝင်ပြီးနောက် "Queen In-Hyun's Man" (၂၀၁၂) ၌ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ် နာမည်ကြီးလာကာ "ကြယ်ဆီကကျမချစ်သူ" (၂၀၁၃-၂၀၁၄) ဇာတ်လမ်းတွဲ၌ ဇာတ်ပို့အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူသည် အချီးမွမ်းခံရသော ရေဒီယိုအစီအစဉ် Let's Crank Up the Volume ၏ဒီဂျေ (ရေဒီယိုကြေငြာသူ) လည်း ဖြစ်သည်။
ရှိန်းကျိန့်မြို့ Shenzhen handledarecord number of containers in 2005, ranking as the world's fourth-busiest port, after rising trade increased cargo shipments through the southern Chinese city. China International Marine Containers, and other operators of the port handled 16.2 million standard boxes last year,a19 per cent increase. Investors in Shenzhen are expanding to take advantage of rising volume.
ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်ဘီလူးများ The term "gas giant" was coined in 1952 by the science fiction writer James Blish. Arguably it is something ofamisnomer, since throughout most of the volume of these planets all the components (other than solid materials in the core) are above the and therefore there is no distinction between liquids and gases. "Fluid planet" would beamore accurate term. Jupiter is an exceptional case, having metallic hydrogen near the center, but much of its volume is hydrogen, helium and traces of other gases above their critical points. The observable atmospheres of any of these planets (at less than unit optical depth) are quite thin compared to the planetary radii, only extending perhaps one percent of the way to the center. Thus the observable portions are gaseous (in contrast to Mars and Earth, which have gaseous atmospheres through which the crust may be seen).